Muuqaal laga soo duubay Qandala iyo Masuuliyiinta Puntland oo ka jeediyey Hadalo yaab leh markay galeen DAAWO!! | kowtharmedia.com
Home MAQAALO Muuqaal laga soo duubay Qandala iyo Masuuliyiinta Puntland oo ka jeediyey Hadalo yaab leh markay galeen DAAWO!!
Muuqaal laga soo duubay Qandala iyo Masuuliyiinta Puntland oo ka jeediyey Hadalo yaab leh markay galeen DAAWO!!
Ciidamada maamulka Puntland ayaa maanta dib u qabsaday magaalada Xeebeedka Qandala ee Gobolka Bari oo ay muddo ku dhow 40 malamood haysteen maleeshiyada taabcsan ururka Xagjirka Daacish, Ciidamada Putland Waxayna kasoo galeen dhinaca badda iyo dhulka.
Mas’uuliyiinta Puntland ayaa sheegay inay iska horimaadyo dhaceen maalmihii Sabatidii iyo Isniintii, kadibna aysan la kulmin iska horimaad ballaadhan.
Maleeshiyada taabacsan Daacish ayaa la sheegay inay u baxsadeen dhinaca buurayalada dhinaca Koonfureed kaga toosan magaalada Qandala.
Waxaana Halkaasi si wada jir ah Warbaahinta ugula hadlay Masuuliyin ka tirsan Puntland, Iyadoona magaalada Qandala aysan ku sugnayn dad rayid ah.
lawareegitaanka Qandala kadib ayaa Ciidama Putland ay meesha kuqabteen Takbiir iyo Hadalo ay kasoo jeediyeen wararka ayaa sheegaaya in suurta gal tahay Mintidiinta Dacish in ee qabsadaan Dhul xeebeed kale oo kuyaala Putland Daacish ayaa dooneysa in ee u guuraan Buuraleyda Putland waxayna raadinaayaan meel ee kasoo dagsadaan saanad Cidan iyo lacago.
Previous PostMUUQAAL: Dahabka daadsan Docda Gurigaaga ee aan La dareensanayn DAAWO!! Next PostShaqo joojinta dhakhaatiirta dalka Kenya oo gashay maalintii saddexaad iyo daryeel xumo soo wajahday Isbitaalada Dowlada Kiinya!!